NASA inofanirwa kusarudza kuti ndeipi pamishando mina iyi inonyanya kufadza - BGR - Tamban RELAY
NASA inofanirwa kusarudza kuti ndeipi pamishando ina idzi inonyanya kufadza - BGR
NASA ine mabhora mazhinji mumhepo izvozvi, kutaura. Kubva kumishoni yeiyo Mars 2020 rover kusvika pakuronga kudzoka kwevanhu kuMwedzi muna 2024, pane zvakawanda zviri kuitika kuUS space agency nhasi mazuva ano. Pasinei neizvi, NASA ichiri kutarisa kune ramangwana uye kuronga mishoni kunyange kumberi.
Asi NASA ine zviwanikwa zvishoma, uye haigone kuita zvese zvainoda, kunyangwe kana mishoni dzayo dzingaratidzika kunge dzinonakidza. Mune chitsva blog post nhasiNASA inopa mashoma emamisheni matsva ayo ari kuongorora izvozvi. Imwe neimwe yeaya mamishinari asingadhuri aigona kutora mwedzi inenge mipfumbamwe, asi kusarudza pakati pawo hakuzove nyore.
Mishoni dzinogona kuve dzakatariswa nezvikwata sechikamu chechirongwa cheNASA Discovery, uye timu yega yega inowana mubairo wemamiriyoni mazana matatu emadhora kuti "vagadzire uye vadzidze" zvirongwa zvavo NASA isati yasarudza mishini yaichaita. chaizvoizvo.
Heano kuparara kweimwe yeiyi mishoni dzinogona kuitika:
DAVINCI + (Yakadzika Atmosphere Venus Kuongorora kweNoble gasi, Chemistry, uye Kufungidzira Plus)
DAVINCI + ichaongorora mamiriro ekunze eVenus kuti inzwisise maumbirwo ayo, yakave nokushanduka uye kuona kana Venus anga atove nemakungwa. DAVINCI + inopinda mumamiriro ekunze eVenus kunyatso kuyera kuumbika kwayo pasi pamusoro.
IVO yaizoongorora mwedzi weJupita, Io, kuti udzidze maitiro emasimba emadziro emiviri yepasi. Io anopiswa nekupwanya kusingaperi kwemasimba aJupiteri uye ndiwo muviri unoshanda zvakanyanya uchiputika mumuchadenga. Zvishoma zvinozivikanwa nezve chaiwo hunhu hweIo, sekuvapo kwegungwa remagma mukati. Uchishandisa mapapiro epamoyo, IVO yaizoongorora kuti magma inogadzirwa sei uye kuti yakaputika sei paIo.
Trident aizoongorora Triton, mwedzi yakasarudzika uye inoshanda chaizvo yeNeptune, kuti unzwisise nzira dzinoenda kune dzinogarwa nyika munzvimbo dziri kure zvikuru kubva kuZuva. NASA's Voyager 2 chinangwa chakaratidza kuti Triton inobata basa zvakare - inogadzira wechipiri mudiki mudenga muchirongwa chezuva - nekukwanisa kuputika kwemapomezi nemhepo inovhuvhuta. Yakabatanidzwa ne ionosphere iyo inogona kugadzira yechando yechando uye kugona kwegungwa remukati, Triton chinhu chinonakidza chekutsvaga kuti tinzwisise kuti zvinogoneka sei pasi rose mukati medu rezuva uye mune vamwe.
VERITAS (kushaya simba kweVenus, nhepfenyuro-sainzi, InSAR, topografia uye spectroscopy)
VERITAS yaizobata pamusoro peVenus kuti itarise nhoroondo yenyika yepasi uye vanzwisise kuti sei Venus yakagadziridzwa zvakasiyana nePasi. Mukufamba-famba kweVenus neyekugadzira aperture radar, VERITAS inorongedza nzvimbo kumusoro kwenzvimbo yakawanda yekugadzira mativi matatu echitarisiko chetogografia uye inosimbisa kana ma process, akadai seaplate tectonics uye volcanism, zvichiri kushanda. paVenus.
Imwe neimwe yemamishini iyi inotaridzika kunakidza uye ivo vese vane mukana wekutidzidzisa zvakawanda nezvedu uye nemapuraneti anogara pano. Dzese dzingangove dzakakosha, uye zvingave zvakanaka kana NASA ichigona kuita zvese zvina panzvimbo pezviviri zvinotarisirwa.
Izvo zvakati, kana ndaizosarudza imwe chete yeizvi zvirevo, iyo TrIDENT chinangwa chinoita sechinonyanya kunakidza. Kuongorora Triton, kuwona kuti hwayo hwakaita sei, nei huchishanda, uye nekuwana kuwanikwa kwegungwa repasi pegungwa kungave kwakanyanyisa shanduko uye kunogona kutungamira kumishoni dzinotevera dzinoongorora gungwa iri mukutsvaga kwehupenyu. Chimwe chinhu chinonakidza.
Chinyorwa chinyorwa: NASA
Mike Wehner akataura nezve tekinoroji nemitambo yemavhidhiyo yemakore gumi apfuura, achivhara nhau dzichangoburwa uye maitiro ari muchokwadi chaicho, zvipfeko zvinopfekeka, smartphones uye teknolojia yemangwana.
Munguva pfupi yapfuura, Mike aive munyori wehunyanzvi hweDaily Dot uye akaiswa muUSA Nhasi, Nguva.com uye zvisingaverengeki mamwe mawebhusayithi uye anodhinda. Kuda kwake
nyaya iri kungoita kuti apedzere kupindwa muropa nokubhejera.
Erykah Badu hukadzi hwekunhuhwirira hukasha hunotengeswa kunze
Masayendisiti akawana imba yakavanzika umo Nefertiti…
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) BGR
TELES RELAY 25585 Posts 0 mashoko
AirPods Pro ichiri kutengeswa, asi ikozvino AirPods 2 dzadzoka pamutengo wakaderera - BGR
Aimbova 49ers TE Vernon Davis, Iye zvino Actor, Anochema paSoccerCenter - vanhu
Masayendisiti anonzi akawana imba yakavanzika makavigwa Nefertiti, asi ...
Vanachiremba vaviri vakamiswa basa nekuda kwekubvisa vagazi rekuti transsexual isina mutsindo…